Isifiso sobulili obuvamile ngokubambisana
Ubulili obungaphansi, ubuhlobo obude
Thola okujabulisayo kubo bobabili ndawonye
Uthando olungathandeki olungathandeki
Okushiwo yizindaba ezithengiswa ngeminyaka njengezocansi ezigculisayo kubeka imibhangqwana ngaphansi kwengcindezi enkulu. Sekuyisikhathi sokususa lo mshoshazo we-oriented orientation nge-ifilimu, umsakazo kanye ne-TV.
Isifiso sobulili obuvamile
Ukuhlukunyezwa, ukukhwehlela, ukugqilazwa: Ubulili obubukeka bubonakala buphelile kusukela impumelelo yomhlaba wonke ye "Fifty Shades of Gray".
Fancy ucansi evamile
Esikhathini wathwebula Hollywood version, namahloni futhi bengenakho okuhlangenwe nakho Anastasia lokuqala bazithobisa ononya ngokulinganayo njengoba enhle Billionaire Christian Gray, ngubani wethula Anastasia ezweni ezihlukahlukene sadomasochistic.
Isihloko esiyinkimbinkimbi sesisetshenziswe kulo lonke kusihlwa futhi sesibonakaliso sokuphila kobulili okugculisayo kusukela ekusungulweni kwayo emakethe enkulu.
Njengoba kungenza ingene up on queasy uzizwa omunye kakade: uma kuziwa ukukwazi bakhombise ukuphila ubulili okwanelisayo, umuntu kufanele imikhuba yobulili aziwayo kakhulu kakade wazama - noma okungenani echibini njengoba okhazinyulisiwe ku amashidi, indlela yokwenza ifilimu futhi iqhawe njalo silondoloze.
Usuku, usuku olulandelayo - nomaphi lapho ubheka khona, ubona njengabantu abanelisekile, imizimba ekhukhumezayo futhi uphethe ubulili obuphelele. Yiqiniso, iqiniso lihlukile ngokuphelele: ngaphezu kokucindezeleka kwesikhathi sokuzilibazisa, umsebenzi nomndeni, kuvame ukuhlala isikhathi esincane noma isifiso sokujabulela ubulili obuvamile, obukhulu. Futhi, i-Vorturnen enobuchopho othola ku-TV njalo i-vorgebetet, ngokuvamile ayikho isikhathi esingaphansi.
Esikhundleni semibhangqwana esithandana nabo baxosha phambi kwe-telly. Yiqiniso abaningi babuza: ingabe ubuhlobo bethu noma impilo yethu yobulili inzima kangaka? Ingabe omunye uyamcasula umlingani wakhe ngokobulili?
Abacwaningi bezocansi baseHamburg bathole ekutadisheni ukuthi lokhu kuvamile futhi akuhlangene nemisebe yomsindo womlingani. Uma ubuhlobo obuseduze buhlala, imibhangqwana engaphansi kakhulu inomunye nomunye.
Imibhangqwana esanda kuthanda, kungakhathaliseki ukuthi ibuphi ubudala, inesilinganiso sezinkanyezi ezingu-10 ngenyanga ngocansi komunye nomunye. Abantu ababudlelwane besikhathi eside bawenza ngesikhathi esifanayo ngokwesilinganiso "kuphela" ngezikhathi ze-4. Kuyamangaza ukuthi kusobala ukuthi akunandaba ukuthi ubuhlobo kakade buyiminyaka engu-5 noma i-25. Lokhu kubangelwa ukuthi ubulili buyashintsha ngokwemvelo phakathi kobudlelwane.
Ucwaningo lwendlela yokuziphatha luvuma ukuthi, ikakhulukazi ezinyangeni zokuqala zobudlelwane, ubulili busetshenziselwa ukuhlanganisa abantu ndawonye. Uma ubude buhlala isikhathi eside, uma ucansi luhamba phambili - ezinye izinto zigxila. Ngokuvamile,-ke, umbuzo uvela ukuthi lokho bekuyobe kulungile yini.
Yiqiniso, kufanele kube sobala ukuthi akuzange kube "lokho" okwamanje. Kodwa kuyiqiniso ukuthi ukuphila kobulili kuyashintsha phakathi kobudlelwane. Umbuzo wokuthi umuntu kufanele azame isikhundla esisha ungaphenduki.
Ubulili kumele bujabulise kokubili
Ngokuvamile isihloko sizungeze ukungasebenzi kahle kwe-erectile kanye nokomile kwesisu nangendlela yokubhekana nayo. Lucky yilabo bantu abanomdokotela womndeni abazethemba ngokugcwele.
Iphuzu eliyinhloko ukuqaphela ukuthi ubulili bomlingani ngamunye uhlukile kulowo owawukhona ekuqaleni kobudlelwane. Ngokusobala, lokhu nakho kunenzuzo, ngoba ochwepheshe bathi ubulili ekusebenzisaneni okude, okubizwa ngokuthi "ubulili obuhlukile" endleleni, buya ocansini obujulile ngokomzwelo.
Abalingani ndawonye ukuthola ukuthi yini ucansi ibanika ekugcwalisekeni futhi bafuna ukuzama ndawonye lokho amaphupho kanye nokuhuheka nezinkanuko. Ubulili abelaphi baxwayise kucatshangwa kufakwe kulezo zikhathi imisinga eminingi kakhulu kusukela ngaphandle - ke akufanele ube ziyizibonelo ezinhle kanjani zokulingiswa ezifana eshiwo ngenhla, "amahlanu Shades of Gray" noma izithombe zocansi kuboniswane.
Lokhu kulula ukushiwo kunokwenza, yiqiniso, ngoba umthelela wezocansi we-patter nsuku zonke kuwo wonke umuntu. Yilokho okushiwo yi-supersaturation yansuku zonke yokuqukethwe okweqile okwenza abantu babe ngaphansi kwengcindezi engokomzwelo nengqondo. Umuntu angahle alahlekelwe ukufaniswa okuhlala njalo phakathi kwakho kanye nabathandekayo abaningi abasuka kumaphephandaba. Khona-ke ubulili kufanele bujabulise? Izigigaba.
Ubulili obujabulisayo busebenza emibhangqwaneni ezwa kahle. Lezi zibhangqwana zivame ukuzithola ngokobulili. Into ebalulekile ukuthi ukhulumisane futhi uthethe ngobuqotho ukuthi yini ehamba ekhanda lakho. Kusobala ukuthi lokhu akulula ngaso sonke isikhathi kuwo wonke umuntu.
Ngesibindi, akukho ulimi olwanele lwensimu yezocansi emasikweni ethu, ngoba ayikho isiko elihlakulelwe kule ndawo. Kumele kucace ukuthi ubulili obuhle abukwazi ukuwa esibhakabhakeni. I-Eroticism ayikwazi futhi ayiqhumeki njalo ngokuzenzakalelayo njenge-volcano, ngisho noma ihlale iboniswa kuma-movie. Ubulili obuhle kudinga ukuthi wenze okuthile.
Kunezindlela ezahlukene nezindlela zokwakha impilo yezocansi ukuze ukwazi ukwaneliseka ngakho. Akulula ngaso sonke isikhathi, kodwa kukhona njalo indlela.
Ubulili ngesimiso: Ukulindela ukuba uvele unqobe futhi unqotshwe ukufisa isenzo sokuthandwa sokuthethelelwa. Abantu banamuhla bahlela futhi bahlele usuku lwabo lonke - ngakho kungani ungacansi? Yiqiniso, lokhu kubonakala kunengqondo, kodwa kuyiqiniso ukuthi ubulili obungaphelele buhle nakakhulu kunokungabi nobulili nhlobo.
Izinkulumo zokuxhumana: Ukwakha uhlelo lokuzikhukhumeza ngenkathi ukhuluma ngocansi kungaba yisisusa sokuzijabulisa kwakho. Njengoba nje ungenalo isidlo esifanayo sokudla kwasemini nsuku zonke, ubulili bulele embhedeni, ngokuhamba kwesikhathi ugoqa futhi ugobe. Ukuthola izindawo ezintsha, ezihehayo kungaba yinto ejabulisa kakhulu.
Ukuthatha isikhathi kusiza: Ngenkathi kudlula amaminithi ambalwa kumafilimu, kuze kube yilapho abaphikisi behlelwa ngamaphikishi amnandi emilenzeni, empeleni kuhlukile - futhi lokho kuyinto enhle. Okubizwa ngokuthi "ubulili obuphansi" kwenziwa ngokunyakaza okuncane, kodwa nakakhulu kakhulu. Izinga lobulili landa ngokushesha.
Ukuvuleka kokuthile okusha: Ukuphefumulelwa okuvela ezincwadini namafilimu akudingeki kube kubi. Kubalulekile ukwenza into enhle kuyo. Akudingeki kube yizikhuni, izibhamu nezibani ezivuthayo. Isibonelo, ungaqala ngokumane uxhuma amehlo akho. Kuxhomeke kuzo zonke izinhlobo zobulili kuphela ukuthi bobabili abahlanganyeli bazizwe bekhululekile. Ngakho-ke ukuthi ubulili buhle, kubalulekile ukuthi ngisho no-noyamukelwe.
Ukhohlisiwe - yini manje? | ubambiswano
Ukubambisana nezingane | umndeni
Amagama apilishi nencazelo yawo | ubambiswano
Abazali badinga ukuphumula | Izingane zokubambisana
Uhlobo lobudala | Ukubambisana & nothando